Inona no atao hoe Dredge Pump sy ny fomba fiasa? - Ellicott Dredges
Inona no atao hoe Dredge Pump
Ny paompy dredge dia paompy centrifugal marindrano ary ny fitempon'ny fon'ny dredge. Natao hifehezana ireo akora granular marokoroko sy solida misy habe voafetra amin'ny fampiatoana. Raha tsy misy ny paompy dredge, dia tsy afaka mitondra fitotoam-bary ny dredge mitsoka.
Ny paompy dredge dia natao hitondra sediment, fako, ary fitaovana manimba hafa avy amin'ny gorodona mankany anaty fantsom-pifoka, mitondra ilay fitaovana mankany amin'ny toerana misy ny fantsona amin'ny alàlan'ny fantsona iray. Ny paompy dia tsy maintsy afaka mitantana sombina marimaritra iraisana misy habe samihafa izay afaka mandalo ny paompy, mampihena ny fotoana fohy takiana amin'ny fanadiovana.
Ahoana ny fomba fiasan'ny pumped?
Ny paompy dredge dia misy casing pump ary impeller. Ny impeller dia napetraka ao anaty casing pump ary mifatotra amin'ny motera fiara amin'ny alàlan'ny boaty sy hazo. Ny ampahany anoloana amin'ny casing pump dia voaisy tombo-kase amin'ny fonony fisotroana, mampifandray mivantana amin'ny fantsom-panafosan'ny dredge. Ny famoahana ny paompy dia apetraka eo akaikin'ny tampon'ny paompy dredge ary mifandray amin'ny tsipika fandefasana misaraka.
Ny impeller dia heverina ho fototry ny paompy dredge ary mitovy amin'ny mpankafy izay manery ny rivotra mamorona herin'ny rivotra misintona. Amin'ny fantsom-pifoka, ity banga ity dia mandray ny slurry ary mampita ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fantsom-panafahana.
Toetran'ny mpamaky dredge
Ny dredge dite Cutter dia matetika misy fantsom-boalona napetraka izay misy ivon-tsivon'ny mpanondrana azy na eo ambany fantsom-pifandraisana mba hamokarana bebe kokoa ary fanatsarana ny fahasalamana.
Ny paompy dredge dia natao hanosika tsiranoka ranoka sy ranoka lava.
Amin'ny toe-javatra mety, ny pumping dredge dia mety hiteraka vaky haingana kokoa noho ny hafainganam-pandeha haingana indrindra.
Ny modely sasany dia mety hiteraka fanerena mahatratra hatramin'ny 260 h. (80 m) ny lohany.
Azo tanterahina tsara ny zava-bitan'ny pump pump.
Misafidiana paompy kamiao
Ny ankamaroan'ny dredge mahazatra dia noforonina ary namboarina tamina paompy dredge lehibe indrindra hahatratrarana ny vokatra azo amin'ny ankapobeny. Raha toa ka tsy voafaritra ny haben'ny paompy sy ny karazany dia tsara ny mandinika ireto antony manaraka ireto rehefa misafidy paompy dredge sy dredge: karazana sy hatevin'ny fitaovana halefa, na diesel na herinaratra mandeha amin'ny herinaratra, ilaina ny motera HP (kw), angon-drakitra fampisehoana paompy, faharetana, fanamorana ny fikojakojana, ary antonony ny androm-piainan'ny toe-piainana mahazatra, ny toetra ilaina rehetra amin'ny fizotran'ny fifantenana. Mitovy lanja amin'izany ny fampifangaroana ny haben'ny fantsona sy ny fitehirizany mba hitazomana ny fikorianan'ny fitaovana tsy misy manentsina ny fantsona ary hitazomana ny famokarana paompy ilaina hamita ny asa.
Ellicott Dredges, LLC dia manolotra tsipika amin'ny fantsom-pandresena manokana natao ho an'ny fampisehoana tsara indrindra isaky ny dredge suction cutter ary noporofoina tamina karazana fampiasa maro manerana izao tontolo izao izy ireo mba ho azo itokisana amin'ny fitaterana fitaovana lozisialy.